बझाङ जान काठमाडौं आएकालाई फेरि विराटनगर नै फर्काउने! :: Setopati
बझाङ जान काठमाडौं आएकालाई फेरि विराटनगर नै फर्काउने! विराटनगरका मेयर भन्छन्- काठमाडौंबाट यहाँ मान्छे आउन हुने, विराटनगरबाट काठमाडौं जान किन नहुने?
नारायण महर्जन काठमाडौं, वैशाख १५
विराटनगरबाट काठमाडौं आएर नागढुंगामा अलपत्र परेकाहरू। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी।
सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशीकी याङलमा तामाङ विराटनगरमा काम गर्थिन्। चैत ११ पछि काम बन्द भयो। कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न देशभरि लकडाउन भयो। उनीहरू ठेकेदारले दिएको कोठामा महिना दिनसम्म बसे।
‘महिना दिनसम्म पैसासैसा सबै सकियो। दाइहरूले वैशाख १४-१५ गते लकडाउन होलो हुन्छ भन्नुभएको थियो। हिजो उहाँहरूले गाडीमा हालेर पठाइदिनुभयो,’ याङलमाले सोमबार दिउँसो सेतोपाटीसँग भनिन्,‘उता गाउँपालिकाबाट काठमाडौं गाडी पठाइदिने भन्नुभएको छ तर यहाँ पुलिसले यहीँ रोकिराखेको छ।’
कामका शिलशिलामा विराटनगर पुगेका बझाङका विष्णुराज जोशी पनि नागढुंगामा अड्किएका छन्।
‘काठमाडौंबाट नेताहरूले जिल्ला-जिल्लामा मान्छे पठाउँछन् भनेर घर जान आएको हुँ, बझाङ हिँडेको मान्छे फेरि विराटनगर फर्काउने भन्दैछन्,’ जोशीले सेतोपाटीसँग भने।
याङलमा र विष्णराजजस्तै झन्डै ५० बढी मानिस १२ घन्टादेखि नागढुंगामा अलपत्रमा परेका छन्।
महिना दिनदेखिको लकडाउनले विराटनगरमा अड्किएकालाई महानगरपालिकाले गाडीको व्यवस्था गरेर काठमाडौं पठाएको थियो।
उनीहरू चढेका गाडी सोमबार बिहान नागढुंगा आइपुगे। नागढुंगाबाट प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौं छिर्न दिएन। त्यहीँ ओराल्यो।
दिउँसो काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसहितको टोली नागढुंगा पुग्यो।
उनीहरूलाई जहाँबाट आएका हुन त्यहीँ फर्काउने निर्णय भयो तर विराटनगर जाने गाडी नपाएकाले ती यात्रुहरू अहिले पनि नागढुंगामा अलपत्र परेका छन्।
‘उनीहरू जहाँबाट आएका हुन् त्यही फर्काउने निर्णय गरियो,’ काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने, ‘करिब ५० जना जति बाँकी छन् आज बेलुकीसम्म फर्काइनेछ।’
नागढुंगामै अड्किएका जगदीश भण्डारीले १ सय ३० जनाजति काठमाडौं आएको र प्रशासनले नाम लेख्दै जानुस् भनेको बताए।
काखे बच्चा च्यापेर विराटनगरबाट आएका नागढुंगामा अलपत्र (फोटोफिचर)
‘सुरूमा एक जना सईसाबले नाम लेख्दै पठाउँदै गर्नुभयो,’ भण्डारीले भने,‘पछि एक्कासी रोकिदिनुभयो। हामीसँगै आएकाहरू काठमाडौं छिर्दा केही नहुने, हामीलाईचाहिँ फर्काइदिने?’
उता विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले पनि काठमाडौंबाट फर्किनेको जिम्मेवारी आफूले नलिने बताएका छन्।
काठमाडौं प्रशासनले विराटनगर फर्काउने गल्ती नगर्ने पराजुलीले बताए।
‘काठमाडौंमा अलपत्र परेकाहरू दिनदिनै बाहिर गइरहेका छन्, विराटनगर पनि आइरहेका छन्, हामीले त रोकेका छैनौं बरू आफ्ना नागरिकलाई खोजीखोजी ल्याएका छौं,’ पराजुलीले भने,‘विराटनगरबाट काठमाडौंमात्र होइन, झापा, जनकपुर, वीरगन्ज गएका छन्।’
उनले महिना दिनसम्म काठमाडौंबाट धमाधम मान्छे गाउँ आउँदा केही फरक नपर्ने तर काठमाडौंचाहि मान्छे जान नपाउने भन्दै आक्रोश पोखे।
‘काठमाडौं छुट्टै देश हो र विराटनगरबाट मान्छे जान नपाउने। महिना दिन भइसक्यो मानिसहरूले आफ्नो घर जान्छौं भने हामीले पठाइदियौं,’ उनले भने,‘जसरी हामीले हाम्रो महानगरपालिकाभित्र आउने सबैको जिम्मा लिएका छौं त्यसैगरी सबै जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकको जिम्मा लिए भइहाल्छ नि।’